Nanolotra Ny Lehiben’ny Zava-mahadomelina ho ‘Fanomezana Fanaovam-beloma Farany’ an’i Obama i Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Janoary 2017 2:02 GMT
Nanambara ny governemanta Meksikana ora vitsy talohan'ny fametrahana amin'ny toerany an'i Donald J. Trump ho filohan’ ny Etazonia faha 45, fa hamerina an'i Joaquin Guzman Loera , fantatra amin'ny hoe “El Chapo” Guzman, izay karohana araka ny fampiharana ny lalàna Amerikana .
Nosokajiana ho tena jiolahy raindahiny indrindra nokarohina teto amin'izao tontolo izao i “El Chapo” talohan'ny nahavoasambotra azy indray tamin'ny taona 2014. Tamin'ny Jona 2015, afa-nandositra fanindroany avy ao amin'ny toerana noheverina ho manana fiarovana sarotra izy, izay nampiseho miharihary ny tsy fahatomombanan'ny rafitry ny fonja ao Meksika, ary efa notaterin'ny Global Voices teo aloha izany.
Nitatitra ny vaovao tamin'ny herinandro teo ny tranonkala Meksikana “Animal Político” izay nanazava izay ho fiafaran'i Guzman:
Nanome soso-kevitra momba ny loharanom-baovao maro mba hahalalana bebe kokoa ny zava-misy manodidina ilay mpanao heloka bevava ny Sopitas, tranonkala iray hafa any Meksika:
Mba hamantarana ny halehiben'ny maha-izy an’ i “El Chapo” vakio ny “Manaja anao, El Chapo” izay nosoratan'i Héctor de Mauleón.
Momba ny fandosirany tamin'ny taona 2015 sy ny fomban-drazana Meksikana amin'ny fampiasana ny olon-dratsy mba hitsikerana ny Fanjakana sy ny fanaovana ny herisetra ho zava-misy mahazatra, vakio Ireo Mpamono Olona Ankalazaina, nosoratan'i Paul Piccato.
Farany, raha hijery an'i “El Chapo” ho toy ny mpandraharaha, vakio ny Chapo Guzman, CEO ,nosoratan'i David Perez Esparza.
Araka ny The Washington Post, nanao ny fampodiana ho “fanomezana fanaovam-beloma farany ” an'i Barack Obama ny manampahefana ao Meksika, fa tsy fihetsika midika ho fankasitrahana ny Filoha Trump izany.
Amin'ny maha mpitarika vondrona mitam-piadiana sy lehiben'ny zava-mahadomelina malaza ratsy an'i “El Chapo” , endrik'olo-malaza manana ny anjara toerany amin'ny “Ady amin'ny Zava-mahadomelina” ao Meksika izy, nanomboka tamin'ny filoha teo aloha Felipe Calderón ary notohizan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao, Enrique Peña Nieto.